Nanda Win MyintDigital Marketing ExecutiveNew Day Jobs ဆိုတာ အလုပ်အကိုင်ပေါင်းများစွာ တစ်နေရာတည်းမှာ ရှာဖွေ တွေ့နိုင်တဲ့ အလုပ်အကိုင် website ဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်အကိုင်များ လျှောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့&nbsp;New Day Jobs&nbsp;မှတဆင့် ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။
Tips To Improve Your Time Management Skill
Khai Deih NeamDigital Marketing Executiveတစ်နေ့မှာ၂၄ နာရီရှိပေမယ့် အချိန်မလောက်ဘူးလို့ထင်နေကြတဲ့သူတွေရှိပါတယ်။ တစ်နေ့တာအတွင်းမှာ ကိုယ်ပြီးမြောက်ချင်တာပြီးဖို့အတွက် အချိန်ကို အကျိုးရှိရှိအသုံးချတတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အကယ်၍သာ သင်က လွယ်ကူတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေနဲ့ အချိန်ကို ရှာဖွေအသုံးပြုတတ်မယ်ဆိုရင်တော့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ နေ့တစ်နေ့မှာ အလုပ်များများပြီးနိုင်မယ့် အချက်ကလေးတွေကို ပြောပြပေးပါမယ်။&nbsp;၁။ သင့်ရဲ့ပန်းတိုင်ကို သိပါ&nbsp;အဓိကအချက်ကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ ပုံမှန်ပြုမူလုပ်ကိုင်မှုတွေထဲက ဘယ်အရာကို ပြောင်းလဲချင်လဲဆိုတာကိုပါ။ အကယ်၍ သင်က အချိန်ဖြုန်းနေမိတာတွေကို သတိထားမိတယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ်ဒီနေ့လုပ်ကိုင်ရမယ့် ပန်းတိုင်တွေကို ချရေးလိုက်ပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ အလုပ်နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ပန်းတိုင်ကို ရောက်ဖို့ လုပ်ဆောင်ရမယ့် အလုပ်တွေကို လုပ်ဆောင်ဖို့ စီစဉ်လိုက်ပါ။ တခြားအရာတွေအကုန်လုံးက အချိန်ဖြုန်းတာ သပ်သပ်ပဲလေ။ ကိုယ့်ရဲ့ နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်မှုတွေက အလုပ်လုပ်ကိုင်တာတွေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ အလုပ်အနာဂတ်နဲ့ ဝင်ငွေရဖို့အတွက်နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့လုပ်ဆောင်မှုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ️၂။ ကြိုတင်စီစဉ်ပါသင်မလုပ်သင့်တဲ့အရာတစ်ခုကတော့ ဒီနေ့မှာ ဘယ်အလုပ်တွေပြီးအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ အရာကို မသိပဲနဲ့ တစ်နေ့တာကို စတင်တာမျိုးပါ။ တစ်နေတာမှာ ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကို ကြိုတင်စဉ်းစားစီစဉ်ပြီးအလုပ်လုပ်ကိုင်တာက တစ်နေ့တာလုံး ဘာလုပ်ရမယ်မှန်းမသိပဲ ဟိုဟာလုပ်လိုက် ဒီဟာလုပ်လိုက်နဲ့ ဘာမှမပြီးဖြစ်သွားတာနဲ့ယှဉ်ကြည့်ရင် အသေးအဖွဲလေးပါပဲ။ ကိုယ့်ရဲ့ ပင်ကိုယ်အကျင့်ပေါ်မူတည်ပြီး နောက်တစ်နေ့အစီအစဉ်တွေကို ပထမညမှာ ကြိုတင်ပြင်ဆင်တာတို့ အဲ့ဒီနေ့မနက်မှာ ကြိုတင်ပြင်ဆင်တာတို့ ပြုလုပ်လိုက်ပါ။&nbsp;၃။ ဦးစားပေးမှုကို အမြော်အမြင်ကြီးစွာလုပ်ဆောင်ပါတစ်နေ့တာလုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေကို ပြီးစီးအောင်လုပ်နိုင်အောင်လို့ အချက်ကလေးတွေနဲ့ ရေးမှတ်ထားပါ။ ကိုယ် အဓိက ဦးစားပေးလုပ်ရမယ့် အလုပ်တွေအလိုက် အစီအစဉ်ရေးဆွဲပြီး ပြီးစီးအောင်လုပ်ဆောင်လိုက်ပါ။အစီအစဉ်ရေးဆွဲတဲ့အခါမှာ - အရေးကြီးပြီး အလျှင်လိုတာ၊ အရေးကြီးပေမယ့် အလျှင်မလိုဘူး၊ အလျှင်လိုပေမယ့် အရေးမကြီးဘူး၊ အလျှင်လည်း မလိုဘူး အရေးလည်းမကြီးဘူး။ကိုယ့်ရဲ့ ဒီနေ့ပြီးဖို့ ‘အရေးကြီးပြီး အလျှင်လို’ တဲ့ အလုပ် ၃ ခု ၄ ခုလောက်ကို ချရေးလိုက်ပါ။ တစ်ခုလုပ်ပြီးတိုင်း ပြီးသွားကြောင်း အမှတ်အသားလုပ်လိုက်ပါ။ ကိုယ်ဘယ်လောက်ထိ အစီအစဉ်ကျကျ အောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်လဲဆိုတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။&nbsp;၄။ ကိုယ့်ရဲ့ ပစ္စည်းတွေကို သေသေချာချာထားပါကိုယ်အထားမှားမိလို့ ပစ္စည်းတွေရှာရတာတွေနဲ့ အချိန်မဖြုန်းပါနဲ့။ ကိုယ့်ရဲ့ နေ့စဉ်လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ ကားသော့၊ ပိုက်ဆံအိတ်၊ စာရွက်စာတမ်း၊ ဖိနပ်အစရှိတာတွေကို ရှာနေရတာနဲ့ အချိန်ကုန်တာမျိုးမဖြစ်အောင် ထားနေကျနေရာနဲ့ မှတ်သားထားလိုက်ပါ။ လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကို လိုက်ရှာနေစရာမလိုအောင်လို့ ဗီရိုတို့ စာအုပ်စင်တို့ တခြား သိမ်းဆည်းလို့ရတဲ့နေရာတွေမှာ ကိုယ်လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေကို တစ်စုတည်း ထားထားလိုက်ပါ။ ကိုယ်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေ အဆင်သင့်ရှိတယ်ဆိုရင် ရုံးနောက်ကျတာမျိုးလည်း ရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးလေ။&nbsp;၅။ အနှောက်အယှက်တွေကို ရှောင်ကျဉ်လိုက်ပါ&nbsp;အနှောက်အယှက်တွေဆိုတာ အချိန်ဖြုန်းတာအတွက် ဦးတည်မှုတစ်ခုပါပဲ။ ကိုယ့်ရဲ့ အချိန်ကို အကျိုးရှိရှိ အသုံးချနိုင်ဖို့အတွက် အနှောက်အယှက်တွေကို ကောင်းကောင်းရှောင်ကျဉ်တတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သွေးဆောင်စေတဲ့ အနှောက်အယှက်တွေဖြစ်တဲ့ social media လိုအရာမျိုးတွေကို အာရုံစိုက်တာမျိုးတွေကို လျှော့ချလိုက်ပါ။ အနှောက်အယှက်တွေကနေ အလုပ်လုပ်ရာမှာ စိတ်ရှုပ်ထွေးစေပြီး လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေ မပြီးစီးတာမျိုးလည်း ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ အနှောက်အယှက်တွေကို ဘယ်လိုလျစ်လျူရှု့မလဲဆိုတာရယ် ကိုယ့်ရဲ့ တာဝန်တွေကို ဘယ်လိုပြီးစီးအောင်လုပ်မလဲဆိုတာတွေရယ်ကို ကောင်းကောင်းသိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။&nbsp;New ...
ကျွန်မ တို့တစ်ယောက်ဆီကို တစ်နေ့မှာ အချိန် ၂၄ နာရီ ဆီပဲ ရကျတဲ့အတွက် ရတဲ့အချိန်အတွင်းမှာ လုပ်စရာရှိတဲ့တာဝန်တွေကို ပြီးဆုံးအောင်လုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့ အတွက် အချိန်ကို သေချာစီမံခန့်ခွဲဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အချိန်ကို နည်းစနစ်ကျကျစီမံ ခန့်ခွဲနိုင်ဖို့အတွက် အချိန် စီမံခန့်ခွဲ ရာမှာ သတိပြုသင့်တဲ့ အချက် 11 ချက်ကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်ရှင်။1. အရေးကြီးဆုံး တာဝန်ကို အရင်လုပ်ပါ - ဒါကတော့ Time Management မှာ အရေးကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်မှာ တစ်နေ့တာ လုပ်စရာတာဝန်တွေထဲက အရေးကြီးတဲ့ တာဝန်တွေကို ၂ခု မှ ၃ခု အထိ သတ်မှတ်ပြီး အရင်ဆုံးဦးစားပေးပြီး လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။အကယ်၍ အလုပ်တာဝန် အကုန် မပြီးမြောက်ခဲ့ရင်တောင်မှာ အရေးကြီးတဲ့ အလုပ်တာဝန်တွေ ပြီးသွားတဲ့ အတွက်ကျန်တာတွေကို မနက်ဖြန်ကို ရွှေ့၍လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။2. ငြင်းတတ်ပါစေ - ကျွန်တော်တို့ တွေဟာ အားနာပြီး အခြားလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်မှ အကူအညီတောင်းတာတွေ ကိုလက်ခံမိတတ်ကျပါတယ်၊ သင့်မှာ အလုပ်တွေပိနေတဲ့အခါမျိုးမှာတော့ သင့်ရဲ့ အခြေအနေမှန်ကို သေချာရှင်းပြ၍ ငြင်းပါ၊ အကယ်၍ မငြင်းပဲ လက်ခံမိပါက မလိုအပ်တဲ့ stress တွေရပြီး အလုပ်မပြီးမြောက်တာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။3. တစ်နေ့ကို အနည်းဆုံး ၇နာရီ မှ ၈ နာရီ ကြားအိပ်ပါ - အချို့လူတွေကို အိပ်ချိန်ကို လျှော့ပြီး အလုပ်လုပ်တာက အလုပ်တွေကို ပိုမိုပြီးမြောက်စေတယ်လို့ထင်လေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒါက မမှားပေမယ့် လူအများစုဟာ ဇီဝ ဖွဲ့စည်းပုံ အရ တစ်နေ့ကို ၇နာရီ မှ ၈နာရီ အကြား အိပ်စက်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အိပ်ချိန် အလုံအလောက်မရရှိပါက လည်း သင့်ရဲ့ လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းကိုထိခိုက်ပြီး အလုပ်ပြီးမြောက်နိုင်စွမ်းကိုကျဆင်းစေနိုင်ပါတယ်။4. လက်ရှိလုပ်နေတဲ့တာဝန်ကို အပြည့်အဝအာရုံစိုက်ပါ - အလုပ်လုပ်တဲ့ အခါမှာ Browser tab တွေအများကြီးဖွင့်ထားတာ၊ ဟိုခုန် ဒီခုန်လုပ်တာကလည်း သင့်ရဲ့ အလုပ်ပြီးမြောက်နိုင်စွမ်းကို ကျဆင်းစေနိုင်တဲ့ အတွက် တတ်နိုင်သမျှ သင့်လက်ရှိ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ တာဝန်ကို အပြည့်အဝ အာရုံစိုက်ပြီးလုပ်ကိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်။ ထိုကြောင့် မလိုအပ်တဲ့ Browser tab တွေကို မဖွင့်ပဲ အနှောင့်အရှက်ကင်းတဲ့နေရာမျိုး မှာလုပ်ကိုင်သင့်ပါတယ်။5. တတ်နိုင်သမျှ မြန်မြန်စလုပ်ပါ - အချို့ လူတွေက အလုပ်တာဝန်တစ်ခုပြီးတဲ့အခါမှာ အခါ နောက်တစ်ခုလုပ်ဖို့ကို အချိန်ဆွဲလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် အလုပ်စလုပ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် နောက်တာဝန်တစ်ခုကို ထပ်လုပ်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် တတ်နိုင်သမျှ မြန်မြန် စလုပ်သင့်ပါတယ်။6. အရေးမကြီးတဲ့ အရာတွကို အရမ်းအသေးစိတ်လုပ်ခြင်းကို ရှောင်ပါ - အသေးစိတ် လုပ်တတ်တဲ့ အကျင့်ရှိတာကောင်းပေမယ့် သင့်မှာအလုပ်တွေပုံနေတဲ့အခါမျိုးတွေမှာ အရေးမကြီးတဲ့အရာတွေကို အသေးစိတ်မလုပ်မိတဲ့ အခါ အရေးကြီးတဲ့ အရာတွေကို လုပ်ဖို့အတွက် အချိန် နည်းသွားနိုင်တဲ့အတွက် ဒီအချက်ကို သတိပြုသင့်ပါတယ်။7. အရေးကြီးတဲ့ တာဝန်တွေကို အကျင့်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ - ကျွန်တော်ဆိုရင် Content writer တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ အတွက် စာရေးတာက အဓိကတာဝန် ဖြစ်တဲ့အတွက် စာရေးတာကို အကျင့်တစ်ခုဖြစ်အောင်လုပ်ထားပါတယ်။ ဒါမှ အကျင့်ဖြစ်ပြီး မြန်မြန် လုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဆိုရင်လည်း သင်အလုပ်မှာ သင့်အတွက် အရေးကြီးတဲ့အလုပ်ကို ခွဲထုတ်၍ အကျင့်ဖြစ်အောင်လုပ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။8. ...
Workplace Skill Time management